DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE 13.2 "Harlequin" - SMB Networks | Avy amin'ny Linux
Ny tanjona lehibe amin'ity lahatsoratra ity dia ny hampisehoana ny fomba hahatratrarantsika a DNS sy mpizara DHCP ao amin'ny openSUSE amin'ny alàlan'ny fitaovany fikirakirana YaST fatratra, sy ny rehetra -na saika- amin'ny alàlan'ny interface graphic.
Mampanantena anao hapetraka feno amin'ny alàlan'ny interface graphique izahay, ankoatr'izay -Samy manana ny fanavahana azy ny fitsipika rehetra, sa tsy izany?- an'ny console roa hitady ny fiasan'ny mpivady marina Bind9 + ISC-DHCP-Server, namboarina mampiasa ny YaST - Fitaovana fananganana hafa koa izay andiana fitaovana tena tsara ho an'ny fitantanana lozisialy sy ny fikirakirana ny rafitra.
Ny serivisy voalohany - ary ny manan-danja indrindra amin'ny masonkarena manokana- izay tsy maintsy ampiharina amin'ny tamba-jotra SME dia ny serivisy DNS - DHCP. Raha tsy te-handrindra ny masontsivana ny tambajotra isaky ny toeram-piasana isika, dia tsy tokony hanao raha tsy misy ny serivisy DHCP, araka ny nohazavaina taty aoriana. Eo koa ny fanompoana fotoana na NTP.
1 DNS: ambadika
3.1 Ny fangatahana DNS nataon'ny mpanjifa Windows
4 Ny kernel izay mametraka openSUSE miaraka amin'ny tontolon'ny birao
5 Torohevitra lehibe
6 Serivisy izay azonay tsy atao mba hitahiry loharano
8 Fametrahana tsikelikely amin'ny alàlan'ny sary
8.1 Fanohanana fametrahana
8.2 Fametrahana, fanambaràna ireo tahiry ary fanavaozana ny rafitra
8.3 Fametrahana sy fametrahana ny serivisy DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Tamin'ny volana aprily 2013 dia navoakanay tao amin'ny Avy amin'ny Linux andian-dahatsoratra 5 natokana hanatanterahana DNS voalohany amin'ny Debian:
Master Master voalohany ho an'ny LAN amin'ny Debian 6.0 (V)
Ny compendium an'ireo lahatsoratra etsy ambony amin'ny endrika HTML dia natolotra mba halefa. Na dia nosoratana aza izy ireo -tamin'izany- Miaraka amin'ny famoahana an'i Debian "Squeeze", dia mitoetra ho manan-kery tanteraka ny famaritana sy ny hevitra fonosina ao anatiny.
Izany no antony tsy hanaovantsika fampidirana amin'ny fomba ofisialy ny olana DNS. Vakio ireo lahatsoratra ireo raha manana fanontaniana ianao, izay manome rohy mankany amin'ny literatiora DNS manokana.
En openSUSE, ny lahatahiry sy rakitra ilaina indrindra amin'ity serivisy ity dia:
Archive / sns / sysconfig / nomena anarana
fandaharana / usr / sbin / names-checkconf, / usr / sbin / names-checkzone, / usr / sbin / nomena-compilezone, / usr / sbin / nomena-diary
lahatahiry / usr / share / doc / packages / bind /
lahatahiry / var / lib / voatondro /
lahatahiry / var / lib / nomena anarana / dyn /
rohy an'ohatra / usr / sbin / rcnamed
Ny tanjon'ny Protocol Configuration Host Dynamic - Dinamic Host Configuration Protocol (DHCP), dia ny manome ireo masontsivana fikirakirana ho an'ny tambajotra iray afovoany - amin'ny alàlan'ny mpizara DHCP- fa tsy amin'ny fanamboarana tanana ny toeram-piasana tsirairay. Ny solosaina namboarina mampiasa DHCP dia tsy mifehy ny adiresy IP mijanona. Ity solosaina mpanjifa ity dia voalamina amin'ny fomba iray ahafahany mamela ny fikirakiran'ny tamba-jotra ho azy, araka ny torolalan'ny mpizara.
Ny serivisy DHCP dia manamora ny fiainana ho an'ny Administrators Network. Amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny lozisialy DHCP, azonao atao ny mamaritra ny masontsivana toy ny anaran'ny habaka, vavahady, mpizara fotoana na fotoana, mpizara DNS, mpizara WINS raha ampiasaina, adiresy IP fampielezana - fandaharana, Adiresy IP sy sarontava tambajotra an'ny solo-sainin'ny mpanjifa, ny anaran'ny solo-sainan'ny mpanjifa, ary ny masontsivana maro hafa.
Ny fanovana rehetra, na ny fanovana lehibe ny masontsivana mifandraika amin'ny adiresy IP sy ny fikirakirana ny tamba-jotra, dia azo ampiharina afovoany, raha manitsy na manova ny sehatr'ireo mpizara DHCP isika.
Raha ny mahazatra, ny mpizara DHCP dia mitazona firaketana feno ny adiresy IP na ny fanofana IP, ary amin'ny ankapobeny ny masontsivana lehibe dia ny adiresy MAC isaky ny karatra tambajotra na NIC - Karatra Interface Network. Ao amin'ny openSUSE, ny adiresy IP nampanofaina na ny leases nomen'ny DHCP dia voatahiry ao anaty rakitra /var/lib/dhcp/db/dhcpd.leases.
fonosana dhcp-doc, izay apetraka ao anaty folder / usr / share / doc / packages / dhcp-doc, manolotra antontan-taratasy tena tsara-amin'ny teny Anglisy- momba ity serivisy ity.
Ny rakitra fikirakirana mpizara DHCP dia /etc/dhcpd.conf. Ny fisie DHCP hafa dia / sns / sysconfig / dhcpd, ary eo no hamaritana hoe iza no tambajotram-pifandraisana -na izay interface-tambajotra- hamaly ny mpizara.
Ary satria eo afovoan'ny systemd, manana ny fisie ihany koa izahay /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service.
Raha nanome toky izahay fa tsy hampiasa ny console dia navelanay ho an'ireo tia ny bash. Ho an'ny firaketana Tsy manaikitra ny konsole.
Na dia nampanantena aza izahay fa tsy hampiasa ny console afa-tsy indroa, soso-kevitra izahay mandehana ireto baiko manaraka ireto -toy ny faka- aorian'ny DNS - Ny serivisy DHCP dia nanome adiresy IP mavitrika iray farafaharatsiny, izay mihevitra fa nahavita ny fametrahana tanteraka ny serivisy roa izy ireo ary ao anatin'ny fotoana fohy fanamarinana:
systemctl status atao hoe.service
Ho an'ny marary «versionitis»Mamporisika anao izahay hijery -indrindra amin'ny datin'ny lohateny- mankany amin'ny fisie:
ary amin'ny ankapobeny ho an'ireo rakitra rehetra ao anaty folder /etc/init.d.
Ny fangatahana DNS nataon'ny mpanjifa Windows
Averina indray, ary ao anaty console, mihazakazaha toy ny mpampiasa faka ny baiko:
Makà fotoana kely hijerena ireo mpanjifan'ny Windows tsy tapaka mangataka DNS amin'ireo tranonkala ivelan'ny Enterprise LAN. Ao amin'ny ohatra novolavolaina ato amin'ity lahatsoratra ity dia tsy misy mpampitohy tafiditra ao - mpampita, ho an'ny tanjona mazava amin'ny fampisehoana an'ity endri-javatra amin'ny rafitra fiasa Microsoft® Windows ity.
Ny kernel izay mametraka openSUSE miaraka amin'ny tontolon'ny birao
Ny safidintsika dia ny mampiasa ivon-toerana izay milamina araka izay azo atao ho an'ny servidores. dia soso-kevitra izahay ny fomba hanatanterahana azy.
Rehefa misafidy fametrahana miaraka amin'ny birao LXDE isika dia sokafy amin'ny alàlan'ny default ny openSUSE.kernel-birao»Natao ho an'ny solosaina finday.
Raha te hampiasa ny kernel mahazatra isika any aoriana - kernel-defaultTsy mila mametraka azy io amin'ny alàlan'ny YaST Package Manager fotsiny isika, manavao ny rafitra, misafidy «Safidy mandroso amin'ny openSUSE»Eo amin'ny efijery an-trano, ary safidio ny kernel-default. Ny kinova misy ny voanio roa dia mitovy.
Farany, tsy maintsy esorintsika ny kernel-birao amin'ny alàlan'ny Manager Manager ihany, hatramin'ny GRUB mihevitra azy io ho vaovao kokoa noho ny kernel-default, ary raha misy izany dia hisafidy azy foana ho safidy voalohany. Satria tsy tianay ny "mikorontana" ny GRUBAleonay esorina ny kernel amin'ny birao, satria tsy hampiasa azy io intsony isika.
naoty: Rehefa esorinay ny rafitra avy ao kernel-birao, esorina ho azy ny kinova voapetraka rehetra ao. Azontsika atao ny manamarina azy io indray amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny "Safidy mandroso ho an'ny openSUSE" amin'ny efijery an-trano.
Aza manomboka amin'ny adin'ny fampiharana DNS - DHCP serivisy amin'ny rafitra fiasa rehetra, raha tsy mazava aloha ny foto-kevitra teôria lehibe. Miaraka amin'ny serivisy manan-danja amin'ny tambajotra toy ny DNS, ny lesoka ara-kevitra dia mandoa be ao anatin'ny tontolon'ny famokarana.
Serivisy izay azonay tsy atao mba hitahiry loharano
Amin'ny alàlan'ny modely YaST «Service Manager», raha vantany vao vita ny fametrahana ary raha te hitahiry loharanom-pitaovana dia azonay atao ny manafoana serivisy serivisy izay, amin'ity tranga manokana ity, dia tsy ilaina. Ohatra:
kaopy: Rafitra fanontana Rafitra fanontana Unix mahazatra
lvm2-lvmetad: Logical Volume Manager metadata daemon, raha tsy mampiasa boky mirindra isika
Fahavalon'ny fandikan-teny aho, ok?
GRUB: console amin'ny baiko GRary Unified Bootloader
NTP: Network Tanarana Protocol. Protocol ampiasaina amin'ny fampifanarahana ireo famantaranandro amin'ny solosaina samihafa amin'ny alàlan'ny tambajotra
LAN: Tambajotra eo an-toerana - Lhorita Area Network
SPF: «Framework momba ny mpandefa«. Anti-mekanika SPAM mamela ny mpizara mailaka hanamarina fa marina ny niavian'i SMTP raha handefa mailaka ny adiresy.
TSIG: Sainan'ny fifanakalozana - Tfanodinkodinana Sigtoetra. Voafaritra ao amin'ny RFC 2845 "Fanamafisana ny fifandraisan-doha miafina ho an'ny DNS«
UUID: Identifier universal tsy manam-paharoa - Famantarana tsy manam-paharoa eo amin'ny lafiny oniversite
Nisambotra efijery 71 totalina izahay mba hanehoana ny dingana iray isaky ny dingana azo antoka. Isaky ny efijery fametrahana, ny OpenSUSE dia manamora ny asantsika amin'ny fisian'ny bokotra fanampiana - Vonjeo-mazàna no hita eo ankavia havia.
Sary 01 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 02 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 03 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 04 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 05 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 06 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 07 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 08 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 09 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 10 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 11 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 12 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 13 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 14 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 15 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 16 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 17 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 18 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 19 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 20 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 21 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 22 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 23 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 24 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 25 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 26 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 27 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 28 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 29 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 30 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 31 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 32 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 33 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 34 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 35 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 36 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 37 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 38 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 39 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 40 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 41 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 42 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 43 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 44 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 45 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 46 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 47 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 48 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 49 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 50 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 51 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 52 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 53 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 53-A - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 54 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 55 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 56 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 57 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 58 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 59 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 60 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 61 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 62 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 63 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 64 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 65 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 66 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 67 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 68 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 69 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 70 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 71 - DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Ho fitaovana fametrahana dia afaka mampiasa sary DVD toa ilay nampiasainay tamin'ny fanaovana an'ity lahatsoratra ity izahay openSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso, na kinova mandroso kokoa. Raha tsy manana mpilalao DVD ilay fitaovana, na raha mora kokoa amintsika ny mampiasa fitadidiana - pen drive, azontsika atao izany araka ny voalaza ao amin'ilay lahatsoratra Memory amin'ny autostart hametrahana Debian, CentOS, na openSUSE. Aorian'ny fametrahana ny rafitra fandidiana, ny programa dia azo apetraka ary ampiasaina hanomanana fahatsiarovana Mpanonta sary avy amin'i SUSE Studio.
Manoro hevitra izahay ho an'ny mpizara virtoaly dns.fromlinux.fan RAM manodidina ny 768 megabytes ary kapila mafy 20 GiB. Ny fahatsiarovana dia satria hataontsika amin'ny interface graphique.
Ao amin'ny Sary 05Mikasika ny fikirakirana ny tambajotra, tsy manambara mpizara anarana izahay satria io asa io no hapetraka. Raha manambara mpizara hafa ianao dia ho raisina ho toy ny redirector - mpampita, ary tianay ny hampihatra an'io serivisy io amin'ny fomba hijerena ny fikirizan'ny Microsoft® Operating Systems amin'ny fikarohana ataon'izy ireo amin'ny tranokala amin'ny Internet.
Izahay dia mamorona fanamboarana fizarana tena manokana arakaraka ny tsirony manokana. Aza misalasala misafidy sy mampihatra ilay tianao.
Sary 15: "Safidy Fstab". Misafidy izahay fa ny fizarazarana dia napetraka araka ny LABEL - LABEL ary tsy mifanaraka amin'ny UUID azy, izay ny safidy default. Aorian'ny fametrahana ny rafitra dia vakio ny atin'ny rakitra / Etc / fstab.
Ny mpizara NTP hampifanaraka ny fotoana dia ny Host Hypervisor izay misy ny mpizara DNS - DHCP.
Tahaka ny nifidianantsika ny birao LXDE satria mifanaraka tsara amin'ny filantsika, azonao atao ny misafidy iray hafa atolotry ny mpampiditra ny openSUSE.
Ny anaran'ny mpampiasa voafidy «Buzz»Manome voninahitra ny fizarana ankafizinay. Fa tsy misy. 😉
Ao amin'ny Sary 22Jereo fa manokatra ny seranan-tsambo SSH ao amin'ny Firewall izahay, ary mamela ny serivisy SSH ihany koa.
Azafady mba andanianao fotoana rehefa misafidy ny rindrambaiko hapetraka. Ilay Mpitantana fonosana tsara tarehy, aseho ao amin'ny Sary 23.
Sary 35, 36, 37 ary 38: Aorian'ny fametrahana ny rafitra fandidiana avy amin'ny DVD na fanohanana hafa, ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny manambara ireo trano fitahirizana hanavao ny rafitray, na eo an-toerana izany na amin'ny Internet. Amin'ny tranga misy anay, dia tsy avelanay ny trano fitahirizana samihafa izay manolotra OpenSUSE amin'ny mpizara azy amin'ny Internet, ary ampianay izay eo an-toerana. Izy ireo dia manana ny trano fitahirizana Database, Packman, Updates, Oss y Tsy Os, ampy ho an'ny asa naroso, ary hahatonga anay birao miaraka amin'ny lalàna rehetra. 😉
Sary 39 sy 40: Manomboka ary mamarana ny fanavaozana ny Package Manager an'ny YaST. Amin'ny efijery voalohany dia avelantsika ireo fisafidianana default. Vao tsindrio ilay bokotra Ampiharo.
Sary 41, 42 ary 43: Aorian'ny fanavaozan'ny Package Manager ny tenany, dia mandefa ny efijery miaraka amin'ireo fonosana avy amin'ny sisa amin'ny rafitra havaozina. Ao anatin'izany dia ekenay ihany koa ireo fisafidianana default.
Sary 44: Efijery klasika hamaranana fotoana iray amin'ny LXDE.
Fametrahana sy fametrahana ny serivisy DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE
Sary 47: Aza adino ny mamorona lakilen'ny miafina ho an'ny fanavaozana mavitrika ny faritra DNS, izay fromlinux.fan y 10.168.192.in-addr.arpa.
Sary 49: Andao hojerentsika tsara ilay boaty hita eo ambony «Fikirana ho an'ny faritra fromlinux.fan«. Tsy misy zavatra hafa avelantsika hisy ny fanavaozana mavitrika sy ny famindrana faritra ho an'ny tambajotra eo an-toerana.
Sary 53: Raha asehontsika ny lisitra «karazana:»Amin'ireo firaketana DNS, ho hitantsika fa afaka manambara izao manaraka izao izahay:
A: Fandikana anarana domain IPv4
AAAA : Fandikana anarana domain IPv6
CNAME: alias ho an'ny anaran'ny sehatra
NS: mpizara anarana
MX: fandefasana mailaka
SRV: Fisoratana anarana amin'ny serivisy SRV, be mpampiasa amin'ny Active Directory sy serivisy hafa
TXT: Fisoratana an-tsoratra
SPF: Rafitra politika momba ny mpandefa
Sary 54: ny OpenSUSE dia manamora ny fiainantsika amin'ny tsy fanambaràn'ny DNS DNS. Avelanay ihany koa ny fanavaozana ny faritra mihodina sy ny famindrana faritra ho an'ny tambajotra eo an-toerana.
Sary 55: Rehefa vita ny fikirakirana DNS, tsy misy tsara noho ny manamarina ny fiasany sy ny fanitsiana azy amin'ny alàlan'ny baiko console tsotra tsotra.
Sary 56: Alohan'ny handaminana ny DHCP, tsy maintsy tendrentsika ny interface interface izay hofidintsika ho an'io serivisy io - mety ho iray na maromaro ny interface - Zone ao amin'ny Firewall. Misafidy ny Zone anatiny izay an'ny LAN izahay.
Sary 61 sy 62: Mba hanambarana ny DNS mavitrika dia tsy maintsy mankany amin'ny «Fanitsiana mpizara DHCP manam-pahaizana".
Sary 63: Misafidy ny subnet izahay ary tsindrio ny bokotra «Advanced«, Ary safidio ny safidy«TSIG fitantanana lehibe".
Sary 64: Misafidy ny lakilen'ny TSIG novokarina nandritra ny fanaingoana DNS izahay. Raha tsy vitanao izany dia azonao atao izao ary avereno amboarina ny fanavaozana mavitrika ny faritra DNS araky ny lakile vokarina eto.
Sary 65: Miverina amin'ny subnet voafantina izahay ary izao dia tsindrio ny bokotra «Ovay".
Sary 66: Misafidy ny Range ny tombotsoantsika izahay ary tsindrio eo amin'ny «DNS Dynamic".
Sary 68: Nanomboka ny ekipa izahay openuse-desktop.fromlinux.fan izay ny tanjon'ny lahatsoratray manaraka, ilay apetrakay sy hapetrakay miaraka amin'ny dns.fromlinux.fan mihazakazaka, ary manamarina amin'ny alàlan'ny baiko konsoly tsotra vitsivitsy izahay fa ny DHCP dia nohavaozina tsara ny DNS, ary naverina naverina ireo firaketana DNS mandroso sy miverina ho an'io mpanjifa io.
Miaraha aminay amin'ny Adventure manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » DNS sy DHCP ao amin'ny openSUSE 13.2 "Harlequin" - SMB Networks
Rulf dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara, manomboka manao izany amin'ny taratasy aho, niasa matetika izy ireo
Mamaly an'i Rulf
Tongasoa ianao Rulf. Ny asa lehibe dia ny manampy ireo izay tsy dia tia ny Console na Terminal be loatra, ary ho an'ireo izay vao tonga teto amin'ny tontolontsika avy amin'ny Windows -na mieritreritra ny handray ny fitsambikinana- ary mahita fa misy ny diso izay manome ny fahafaha-mandrindra serivisy sarotra. mampiasa interface graphique.
Eduardo Noel dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara !!!
Miombon-kevitra aminao aho fa mety ho teboka fanombohana ho an'ireo izay te hifindra monina avy ao Windows.
Valiny tamin'i Eduardo Noel
Aleo hazava fa raha tsy misy ireo serivisy ireo dia tsy misy tambajotra mendrika azy io, rehefa miresaka momba ny DNS sy ny DHCP isika dia miresaka momba ny fanohanana feno sy ny totalin'ny tambajotra iray, tsy maninona na SME izany na tsia, toa lainga izany hoe mitaraina isika amin'ny tsy fananana vaovao tanana ary FICO dia manome antsika an'io amin'ny fomba tsy misy fitiavan-tena. Tsy fantatsika ny lanjan'ity fandraisana anjara ity amin'ny tontolon'ny Linux ary bebe kokoa ho antsika izay mino sy matoky rindrambaiko maimaimpoana. Mila asa be dia be ny fanaovana lahatsoratra toy ireny, izay tsy salan'isa, mihoatra lavitra noho izay azon'ny saintsika an-tsaina izany. Izaho manokana dia gaga amin'ny fanehoan-kevitra vitsivitsy ary vitsy ny fitsidihana lohahevitra iray izay mety manome antsika fidirana amin'ny orinasa izany na manome antoka antsika hiasa na aiza na aiza raha vao mahafehy azy isika.
Manohy ny fandraisanao anjara ny FICO izay hanaraka anao ny maro aminay. Misaotra anao !!!
Misaotra betsaka ANAO REHETRA noho ny fanehoan-kevitra tsara sy marina ary ara-potoana. Tena marina fa io no serivisy lehibe indrindra amin'ny tambajotra rehetra, ao anatin'izany ny Internet.
Asa lehibe sy mandreraka Federico, dingana iray hafa arahiko, ary tsy isalasalana fa mifarana ny zava-drehetra araka ny nolazainao, ny ambaratonga amin'ny antsipirian'ny lahatsoratrao dia ahitanao ny zavatra niainanao tao amin'ilay faritra. Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara tsara toy izany.
Misaotra naneho hevitra, Lagarto !!!. Andraso ny manaraka ao amin'ny CentOS 7 miaraka amin'ireo serivisy ireo, fa amin'ity indray mitoraka ity, hampionona. Mandreraka be ny manao lahatsoratra an'ity karazana ity miaraka amin'ny sary, na dia manantena aho fa ireo vao avy amin'ny Windows dia tia azy. 😉
Ismael Alvarez Wong dia hoy izy:
Salama Federico, lahatsoratra mahafinaritra, miasa mafy, ilaina ary tena manandanja momba ny serivisy DNS sy DHCP izay vao navoakanao. Nohazavaina be tamin'ny an-tsipiriany tamin'ny alàlan'ny sary marobe izy rehetra.
Fomba tsara hanamboarana ny mpizara DHCP hahafahan'ny fanavaozana mavitrika ny firaketana DNS ho an'ny faritra mandroso sy miverina, amin'ny alàlan'ny lakile TSIG iray ihany izay namboarina tamin'ny fikirakirana mpizara DNS.
Ary hanamparana azy rehetra ao anaty fizarana ho an'ny mpizara "sary" toa ny openSUSE (izay mbola tsy niasako mihitsy ary ankehitriny ity lahatsoratra ity dia manentana ahy handinika azy io) izay mety ho tena ilain'ny Windows sysadmis izay manapa-kevitra ny hanao fifindra-monina "malefaka" mankany Linux .
Tsy misy na inona na inona ho an'ny lahatsoratra toa an'ity izay mendrika ny hanaraka ireo lahatsoratra sisa kasainao hotohizana hamoahana ny andiany "SMEs".
Valiny tamin'i Ismael Alvarez Wong
Salama Wong !!!. Efa nahazo an'ity lahatsoratra ity ianao. Hitako fa gaga ianao tamin'ny alàlan'ny fampitaovana sary an'ny YaST. Marina izany namana. Namboarina tamin'ny fomba izay ireo izay avy amin'ny Windows dia tsy mahatsapa ho nailikilika tamin'ny voalohany noho ny fampiasana ny console amin'ny Linux.
Ny hevitro manokana dia hoe mora kokoa ny mampiditra, manamboatra ary mitantana mpivady DNS - DHCP amin'ny alàlan'ny console. Saingy tsy mitsahatra ny mamantatra ny tombontsoa azo avy amin'ity distro ity aho.
openSUSE, ary ny mpamatsy vola lehibe indrindra azy, SUSE, dia distros ho an'ny tanjona ankapobeny izay miaraka amin'ny YaST matanjaka mba hanamorana ny fiainana ireo mpitantana ny serivisy.
Faly be aho fa manohy mamaky sy mandalina ny andiany PYMES. Miandry anao amin'ny fizarana manaraka aho. Mihobia !!!.
Na dia "voafandrika" vetivety aza aho noho ny olana ara-barotra, ity distro ity dia mampiseho ny kalitao sy ny fanoloran-tenan'ireo injenierany, tsy mampiasa azy io ho mpizara aho fa ho birao, saingy azoko atao ny manamarina ireo fotodrafitrasa arosony, ny maodely famotsorana ankehitriny : Tumbleweed and Leap dia tena tsara, ny fihodinana voalohany ho an'ny ... olona tia mihodina (: ary Leap ho an'ny mpampiasa matotra kokoa, fa kosa mba hanazavana fa Leap dia manana kinova fonosana tsy mpandala ny nentin-drazana ary tena mety amin'ny mpamorona / sysadmin izay te-hanana Ampiasao ny teknolojia amin'izao fotoana izao Opensuse dia azo antoka fa manome vokatra ambonimbony kokoa noho ny salan'isa, safidy tokony hodinihina.
Efa ela no tiako kokoa ny Open Desktop Desktop ho an'ny tamba-jotra. Ankehitriny rehefa nanandrana izany tamin'ny serivisy aho, dia mety amiko ihany koa. Miombon-kevitra aminao aho amin'ny zavatra rehetra.
Ahoana ny fomba fandraisam-peo ny terminal ary mamorona gif mihetsika